China Kamouflage akorandriaka tantera-drano rip-stop kitapo fatoriana miaramila ho an'ny orinasa mpamokatra toetr'andro mangatsiaka be Xueruisha
Ity karazana kitapo fatoriana ity dia matetika ampiasaina amin'ny filasiana any ivelany amin'ny toe-javatra mafana. Izany dia satria ny fikasana tany am-boalohany an'ity karazana endrika kitapo fatoriana ity dia ny hanomezana fahafaham-po ny zavatra takian'ny olona amin'ny fampiononana ny lasy an-kalamanjana amin'ny fetrany, izay mitarika fatiantoka hafanana bebe kokoa. Ity karazana kitapo fatoriana ity dia azo ampiasaina ho toy ny ondana amin'ny alàlan'ny fanokafana ny zipper.
Nifoha tamin'ny alina mangatsiaka ve ianao? Rehefa mandry ao anaty kitapo fatoriana ao anaty tranolay ianao, mangovitra, mangovitra, tsy mahita tory mora foana noho ny hatsiaka, mihaino ny rivotra mangatsiaka any ivelany, orana sy lanezy, tianao ve ny kitapo fatoriana toy izany hamelana anao hahafaly anao amin'ny hatory mangatsiaka be? Tonga izao ny fotoana hanaovanao ny safidy tsara. Ity kitapo fatoriana camouflage ity dia noforonina ary novokarina arak'ilay kitapo fatoriany. Ny lamba ivelany dia vita amin'ny lamba firakotra camouflage, izay notsaboina tamin'ny fomba fitsaboana ranomaso sy famonoana rano. Manana fanoherana ny rivotra tsara izy, mahatohitra tena amin'ny loto ary tsy mora simba. Ny lamba anatiny dia malefaka sy mahazo aina ary mahatsapa tena akaiky ny vatana. Ny famaritana ifotony an'ity kitapo fatoriana ity dia nofenoina ganagana 90% 1600g, ary ny habeany dia 650. Ny haben'ny avo sy ny fizotry ny lamba 3D dia mahatonga ny kitapo fatoriana ho feno, ary ny ambany kosa mameno ny interlayer, izay tsara kokoa mba hihazonana hafanana . Ny satroka dia mampiasa buckle tena matanjaka, izay afaka manenjana tsara ny loha ary manatsara ny fonosana ankapobeny, izay afaka manome hafanana anao amin'ny tontolo mangatsiaka be. Ity kitapo fatoriana ity dia azo ampiasaina amin'ny ankamaroan'ny tontolo mangatsiaka tsy misy olana, noho izany dia mety amin'ny scenario marobe, toy ny lasy an-trano, fitsangantsanganana, fitsangantsanganana an-tendrombohitra, fikarohana siantifika amin'ny faritra mangatsiaka, asa, diabe, ary fanoherana ny hatsiaka mafy sy rivotra. Raha liana amin'ity kitapo fatoriana ity ianao, saingy ny famaritana ny kitapo fatoriana dia tsy mifanaraka amin'ny filan'ny tsenananao, dia afaka manatona anao hifandray aminay ianao. Ity kitapo fatoriana ity dia manohana fanaingoana lalina. Afaka misafidy ny lamba sy ny famenoana ny kitapo fatoriana mifanaraka amin'ny zavatra ilainao ianao. Azonao atao ny mametaka LOGO na lamina mifanaraka amin'ny filan'ny mpanjifa amin'ny tsenan'ny varotrao. Tongasoa ianao hanoro hevitra sy hanafatra.
Teo aloha: Fivarotana mafana famonoana rano tena tsara kitapo fatoriany tsy misy rivotra ho an'ny mpihaza tafika
Manaraka: Kitapo fatoriana azo zahana valopy tokana misy loko miloko amin'ny lohataona sy fararano
Fivarotana mafana mandro amin'ny rano tena mahazaka rivotra ...
Mpanamboatra 2020 ambony 90% ambany feno tanany ...